चाैथाेपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै, फाेरमलार्इ दुर्इ मन्त्रालय दिने तयारी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चाैथाेपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै, फाेरमलार्इ दुर्इ मन्त्रालय दिने तयारी
सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७ मा प्रकाशित !
काठमाडाैं । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएसँगै फाेरमलार्इ दुर्इ मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेकाे विशेष स्राेतले जनाएकाे छ । फाेरमलार्इ सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली चाैथाेपटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार दुई बुँदे सहमति भएकाे छ ।
फोरमले शहरी विकाससहित दुईवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि यसबारे सरकारले अाैपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाे छैन । हाल शहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री अाफैसँग रहेकाले फाेरमलार्इ उक्त मन्त्रालय दिन कुनै अप्ठेराे नरहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ । फाेरमले अर्काे स्वास्थ्य र सूचना तथा संचार मन्त्रालय मन्त्रलय पाउन सक्ने अाँकलन गरिएकाे छ, जुन हाल राज्यमन्त्रीले सम्हालेका छन् ।
नेकपाका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । सुरूदेखि नै फोरम सरकारमा सहभागी हुने कुरा चलेकाे थियाे तर विभिन्न असमझदारीले गर्दा ढिलाइ भएकाे बताइन्छ । फाेरम सरकारमा जाने भएभछि मधेसकेन्द्रित अर्काे प्रभावशाली पार्टी राजपासँग भने सम्बन्ध चिसिएकाे छ ।
PREVIOUS POST Previous post: फोरमसँग नेकपाको दुई वुँदे सहमति, फोरम सरकारमा सहभागी हुने पक्का (सहमती पत्र सहित )
NEXT POST Next post: गणतन्त्र घोषणाका १३ वर्ष : निराशजनक विगत, आशाकाे भरमा भविष्य
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ १३:४७